कसरी बन्यो भुटान संसारकै खुशी र शान्त देश ? – Khabarhouse
Khabar house | १४ माघ २०७६, मंगलवार ०६:११ | Comments
एजेन्सी : विश्वको प्रदुषित शहरको सूचीमा काठमाडौं पनि पर्छ । यस्तै विश्वका सबै भन्दा बढी प्रदुषित शहर भएको देशमा भारत पनि पर्छ। भारतका सात वटा शहर विश्वका धेरै प्रदुषित शहरमा पर्छन। प्रदुषणका कारण विकसित मात्रै नभइ हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकले पनि समस्या भोगिरहेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान भने यो मामिलामा भने सम्पन्न देखिएको छ ।
विश्वमै प्र’दुषण मुक्त देशको रुपमा भुटानले परिचय बनाएको छ । यो उपलब्धीमा सरकारी नीतिको जति योगदान छ त्यति नै भुटानको जनताको पनि । भुटानको प्राकृतिक शौन्दर्यलाई देखेर नै विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । ग्रोस नेसनल ह्याप्पीनेस सेन्टर भुटानका प्रमुख डा. साँगडू क्षेत्री भन्छन्, ‘भुटानका जनता प्रकृतिलाई भगवान मान्छन् ।
यहाँका थुप्रै पुस्ताका मानिसहरु अहिले पनि एक साथ एकै घरमा प्रकृति प्रति चिन्ता र चासो राख्दै बस्ने गर्छन् ।’भुटानको जीडीपी भारतको भन्दा कम छ । यद्यपि यहाँका मानिस प्रसन्न, खुशी, सन्तुष्टका साथ प्रकृति लाई प्रेम गरेर बस्छन् । हरेक वर्ष जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । यही सन्दर्भमा भुटान विश्वको सबैभन्दा शान्त, स्वच्छ र खुशी देश कसरी बन्यो ? पाँच कारण बुझौँ ।
१. ७० प्रतिशत जंगल सुरक्षित : भुटानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जंगल हो । ७० प्रतिशत क्षेत्रमा जंगल रहेको भुटानलाई विश्वकै हरियालीले हराभरा देशको रुपमा चिनिन्छ । यसका साथै विश्वमा सबैभन्दा बढी अक्सिजन भएको देशको रुपमा भुटानले परिचय बनाएको छ । पर्वत, नदी, स्वच्छ पानी तथा हरियाली भुटानको विशेषता हो । यसै कारण भुटान प्रदुषणरहित देश बनेको छ ।
२. २० वर्षदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्र’तिबन्ध : प्लास्टिकको प्रयोगमा भुटानले २० वर्ष अगाडि नै प्रति’बन्ध लगाएको थियो । सन् १९९९ मा यहाँ प्लास्टिकको कुनै पनि सामान प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अझै पनि नेपाल र अन्य थुप्रै देशहरुले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । तर भुटानले प्लास्टिकको नकारात्मक प्रभाव २० वर्ष अगाडि नै बुझेको देखिन्छ ।
३. धुमपान विरु’द्धको कानून बनाउने पहिलो देश : भुटानमा धुमपान तथा सुर्ति’जन्य पदार्थ से’वनमा पूर्ण प्रति’बन्ध छ । धुमपान विरु’द्धको अभियानमा भुटानले गरेको लडाइ निक्कै पुरानो समय देखि भएको पाइन्छ । सन् १७२९ मा धुम पान सम्बन्धी कानून बनाउने पहिलो देश भुटान भएको मानिन्छ । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा यहाँ धुमपान वि’रुद्धको अभियान सशक्त भएको थियो । सन् २००४ मा भने भुटानले देशभर धुमपान सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भुटानमा धु’मपान सेवन गर्नु कानूनी हिसाबले सिँधै जे’ल स’जाय हुने छ भने यस अभियोगमा जमानत मिल्ने छैन ।
४. हियाली वृद्धिको कीर्तिमान : वन, जंगलको हरियालीले भरिएको भुटानले यस कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सन् २०१५ मा सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा भुटानमा एक सय युवाको एक समूहले एक घण्टामा ४९ हजार ६ सय ७२ बिरुवा रोपेका थिए । सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको उक्त कार्यपछि गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा यो कीर्तिमान भुटानको नाममा छ । यस पटक पनि पछिल्लो कीर्तिमानलाई तोड्न दश हजार बिरुवा रोपिएका छन् । यस्तै २०१५ मा भुटानका राजा–रानी को पहिलो सन्तान राजकुमार ग्यालसेको जन्मदिनको उत्सव मनाउन हजारौँ मानिसहरुले एक लाख आठ हजार विरुवा रोपेका थिए ।
५. वातावरण दिवसको अवसरमा पैदल दिवस : भुटानले गएको वर्ष विश्व वातावरण दिवसलाई पैदल दिवसको रुपमा मनाउने पहल गरेको थियो । भु’टानको यातायात विभाग रोयल भुटान पुलिसको निर्देशन अनुसार देशभरका शहरी क्षेत्रमा यातायात बन्द गरिएको थियो । आ’पत कालिन सेवाका सवारी साधन बाहेक अन्यलाई भने उक्त दिन आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसो गर्नुको पछाडि उक्त दिन सबै मानिसहरु आफ्नो कामका लागि पैदल नै हिँडेर जाउँन् भन्ने हो । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र शारीरिक अभ्यासले तन्दुरुस्ती ल्याउने छ ।